अनसनको धम्कीले पनि देखिएन सेयर बजारमा सुधार: ६२ अंकले घट्यो, झनै खुम्चियो कारोबार रकम - Arthatantra.com
अनसनको धम्कीले पनि देखिएन सेयर बजारमा सुधार: ६२ अंकले घट्यो, झनै खुम्चियो कारोबार रकम
काठमाडौं । सेयर बजारमा आज पनि भारी अंकको गिरावट आएको छ । बुधबार बजार ६०.०२ अंकले घटेको हो । बजार परिसुचक पनि १८७६.५९ अंकको बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
उक्त दिन कारोबार रकममा पनि गिरावट खाएको छ । अघिल्लो दिन ७ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा आज भने ६ अर्ब ६४ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने गरेको व्यवस्थाले गर्दा यतिबेला बजारमा निकै असर देखिएको छ ।
आइतबार बजार १०८ अंकले घट्यो । ५ प्रतिशतको नकारात्मक सर्किट लागेपछि बजार बन्द भयो । सोमबार लगानीकर्ताले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विरुद्धमा विरोध र्याली समेत गरेको थिए ।
त्यसपश्चात सोमबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई भन्नु भएको थियो । गभर्नर अधिकारीले पनि आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । फलस्वरुप बजार १६२ अंकले बढेको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति तीन महिना अघि संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जसको असर बजारमा पुनः परेको देखिएको छ । सोमबार मन्त्रीले गभर्नरलाई गरेको फोनका कारण बढेको बजार मंगलबार राष्ट्र बैंकको धारणाले गर्दा पुन घटेको छ ।
यता, सेयर लगानीकर्ताले आज (बुधबार) देखि २९ गतेसम्म माइतिघर मण्डलामा दैनिक २ घन्टा रिले अनसन बस्ने भएका छन् । पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितीले आजदेखि माइतीघरमा ३ देखी ५ बजेसम्म रिले अनसन बस्न लागेको लागेको जनाएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २३ बुधवार १५:०३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे २ अर्ब ६५ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
पछिल्लाे ३ कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च दरमा वृद्धि, आज क–कसले कमाए ?
कुमारी बैंकका दुई सेयरधनीले बिक्री गर्दै सेयर, कसको कति कित्ता ?
वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार ११:३०
काठमाडौं । कुमारी बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेको छ...
अर्थको प्रष्टिकरणः सम्पति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारमा छुट दिँदैनौ
वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार ११:१८
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सम्पति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा...